Tag: xayeysiiska google | Martech Zone
Tag: xayeysiiska google
SiteKick: Uwarbixinta Ka Warbixinta Falanqaynta Cad-Cad ee Macaamiishaada
Jimcaha, Sebtember 4, 2020 Jimcaha, Sebtember 4, 2020 Douglas Karr
Haddii aad u shaqeyneyso macaamiil fara badan, dhisida warbixin aasaasi ah ama isku-daridda ilo badan oo ku saabsan xalka muraayada waxay noqon kartaa mid aad u adag. SiteKick wuxuu kula tacaali karaa dhammaan warbixinnadaada soo noqnoqda toddobaadle, bille, iyo warbixinno saddex-biloodle ah. Warbixin kastaa waxay ku jirtaa qaab soo bandhigid (PowerPoint) waana la calaamadeyn karaa, oo loo calaamadeyn karaa hay'addaada ama macmiilkaaga, natiijooyinka waa la tafatiri karaa ama macluumaad dheeri ah ayaa la bixin karaa ka hor inta aan loo dirin macmiilkaaga. SiteKick wuxuu bixiyaa Faa'iidooyinka soo socda Warbixinta Meelo Badan
Talaado, Maarso 31, 2020 Talaado, Maarso 31, 2020 Douglas Karr
Daraasad sanadeedkeedii afaraad ee ku saabsan waxqabadka warshadaha tafaariiqda ee Google Ads, Sidecar waxay ku talinaysaa in dukaamada elektaroonigga ahi ay dib uga fikiraan istiraatiijiyadooda ayna ka helaan booska cad. Shirkaddu waxay ku daabacday cilmi-baarista Warbixinta Sannadlaha ee 2020: Xayeysiiska Google ee Tafaariiqda, daraasad dhammaystiran oo ku saabsan waxqabadka qaybta tafaariiqda ee Google Ads. Natiijooyinka Sidecar waxay muujinayaan casharro muhiim ah oo loogu talagalay dukaamada tafaariiqda inay tixgeliyaan dhammaan 2020, gaar ahaan jawiga dareeraha ee uu abuuray COVID-19 dillaaca. 2019 wuxuu ahaa mid ka tartan badan sidii hore,